काठमाडौका मेयरको प्रथम कदम | Hamro Patro
नेपाली समय: 19:33:54
स्थानीय चुनाव २०७४ सालको प्रथम चरणको केन्द्रबिन्दु, काठमाडौका नवनिर्वाचीत मेयर र उपमेयरले शहर सफा गरौं अर्थात क्लीन द सिटीको अवधारणा अगाडि ल्याएका छन् ।
कार्यभार सम्हाले लगत्तै जून १ तारिखका दिन क्लीन द सिटीको अवधारणा ल्याएका छन् ।
वास्तवमै बल्खुवाट बुढानिलकण्ठ पुग्दा धुलोले नाकनक्शा बिगार्ने यस शहरमा बोकेको पानी र मास्क भित्रको हावाले सबैको आँत बिगारेको छ । स्वच्छ शहर अवधारणा स्वागतयोग्य छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् : कस्तो हुनेछ स्थानीय तहको अर्थ नीति?
नवनिर्वाचीत जनप्रतिनीधिहरुको यो स्वागतयोग्य कदम यसअघीका अन्य धेरै सुधारात्मक घोषणाहरुजस्तै कुरा र तालीमा मात्र सिमीत नहोस्, हाम्रो चाहना यही त हो ।
शहरमा हरेक दिन उज्यालो हुनुपूर्व नै फोहोरहरु उठाइसक्नुपर्ने प्रावधानका साथै अन्य थुप्रै सुधारात्मक कदमहरु मेयरले सुन्धारा स्थित कार्यकक्षमा पहिलो दिनमै गरेका छन् ।
कुनै पनि पार्टी, धारणा र ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर ५०औँ लाख मान्छेहरुको साझा थलो काठमाडौलाई बस्नयोग्य स्वच्छ शहर बनाइयोस्, शुभकामना ।
वाटो सरसफाई कार्यक्रम ल्याउने जनाँउदै नवनिर्वाचीत मेयरले बुढानिलकण्ठ क्षेत्रवाट वाटो सरसफाई कार्यक्रम शुरुवात गरिने बताए । एउटा कुरा यहाँ जोड्न चाहयौ कि कुचो, डोको र झाडुका आडमा मात्र भन्दा क्लीनीगं मेसिन र प्रविधीमार्फत नै यस्ता कार्य गरियोस् । हातमा कुचो भन्दा त संयन्त्र र प्रविधीनै महानगरका गल्लीगल्ली सरसफाई गर्न प्रयोगात्मक हुन्छन्, हैन र ?
५ वर्षभित्र काठमाडौलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाँउने योजना पनि महत्वाकांक्षी भएर पनि बास्तविक छ । सास्कृतिक र धार्मिक धरोहरवरिपरिका स्थानलाई निशुल्क् वाईफाई सुबिधा सम्पन्न बनाँउने र २४सै घन्टा चलायमान काठमाडौको परिकल्पना लगायत सार्वजनिक शौचालयको जरुरतलाई आत्मसाथ गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य नै छ ।
भुकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरुका नक्शाकार्यको शुल्क मिनाहा गरिने कुरा भने बहुतै सराहनीय छ । रञ्जना लिपीको प्रयोग अनि नेवारी र नेपाली दुबै भाषालाई औपचारीक्ताको भाषा बनाईने कदम पनि प्रशंसनीय छ ।
८० वर्षभन्दा माथीका बृद्ध अनि ७५ वर्ष माथीका वृद्धाहरुलाई महानगरपालिका मार्फत थप रु १२००० प्रतिवर्ष वृद्ध भत्ताको ब्यबस्था पनि राम्रो कार्यको थालनी हो । महानगरवासीहरुमा केही उत्साह र आशाको सञ्चार भएको छ । वृद्धवृद्धाका साथसाथै यूवाहरुले पनि महानगरमा रोजगार र ब्यवसायका सरल र सहज ब्यबस्था पाउन हाम्रो कामना छ ।
भुँईचलोले भत्काएका संरचनाहरु ट्वाल्ल हेरिरहेका छन्, महानगरको ध्यान जाओस् सकेसम्म छिटो ।